Nyaya yeGwaro reBumbiro reMitemo Yoramba Ichinetsa
Mumwe wemasachigaro matatu ekomiti yeparamende iri kutungamirira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, VaDouglas Mwonzora, veMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, vanoti komiti yavo inotarisira kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vachavhota pareferendamu, zvichatsigira gwaro rebumbiro idzva zvisinei kuti pane vamwe vanhu vari kuti bumbiro iri rirambwe.
VaMwonzora vati vakaita sasachigaro weNational Constitutional Assembly, Va Lovemore Madhuku, vakabuda pachena kuti havasi kuzotsigira bumbiro iri iro risati ranyorwa. VaMwonzora vatiwo gwaro ravakabuda naro rakanaka kudarika rakaitwa muna 1999, rikarambwa mureferendamu yakaitwa muna Kukadzi 2000.
Asi VaMadhuku vanoti sangano ravo harisi kutsigira chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva chinotungamirwa nehurumende.
Zvichakaro, nyaya yekunyorwa kwebumbiro remitemo inenge yoramba yonesta mushure mekubuda kwemashoko ekuti vatungamiri vehurumende yemubatanidzwa vanoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vakatenderana kuti pane mukana wekuti mapato awirirane pane zvimwe zvinhu zviri kukonzera mutauro.
Asi MDC-T neMDC-N dzainge dzati dzatambira gwaro rebumbiro idzva uye hapana zvinofanira kuvandudzwa.
Asi Zanu-PF inoti haina kufara nezvakabuda mubumbiro zvakafanana nekuendeswa kwemasimba kumatunhu, masimba emutungamiri wenyika, masimba emuchuchusi mukuru wehurumende, kuvandudzwa kwematare, komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu uye nyaya yekuti anenge achikwikwidza semutungamiri wenyika abve adoma vatevedzeri vake vaviri.
MDC-T yazeya nyaya yebumbiro neChipiri asi zvinonzi hapana kuwirirana mubato kuti yotora danho ripi. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti VaTsvangirai havasi kufara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika asarudze vatevedzeri vake munguva yesarudzo uye vanotiwo vamiriri veparamende vari mubumbiro vakawandisa. MDC-N iri kutarisirwa kezeya nyaya iyi neChitatu.
Sachigaro weCOPAC achimiririra bato iri, VaEdward Mkosi, vaudza Studio7 kuti hapana kudzokera kumashure pane zvakatenderanwa. Zvinonzi nyaya iyi ichazeyiwa zvizere paNational Council yebato iri musi weChishanu.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu PF, vanotiwo bato ravo richayedza kupedzisa nyaya iyi neChitatu.